Bloggeygu wuu kafiican yahay 99.86% dhammaan baloogyada kale! | Martech Zone
Waxaan aqriyay wax weyn post laga bilaabo blog-saaxiib cusub oo maanta ah Burnout Blog. Waxay igu kaliftay inaan la yaabo halka ay waxyaalahan baloogyada oo dhan ahi i helayaan. Maaha inaan ka fekerayo inaan joojiyo balooggayga, wax fursad ah uma lihi taas! Aad ayaan u jeclahay (oo waxaan ula jeedaa wax badan!). Nasiib darrose, waan fiicnaan karaa ama suuragal ma noqon karto - waxay kuxirantahay sidaad u aragtay. Marka ma joojin karo shaqadayda maalinlaha ah weli (runtiina ma doonayo inaan taas sameeyo, sidoo kale).
Technorati waxay ku qortay bloggeyga lambarka 74,061. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxaan u maleynayaa in su'aashu tahay sidee buu ugufiican yahay wanaaggu? Waxaan shaki weyn ka qabaa in qof kasta oo maskaxdiisa saxda ah uu fiiriyo Technorati oo uu isweydiiyo… Waxaan la yaabanahay yaa ku jira 75,000 ee ugu sarreeya?
Waxaan hayaa 67 xiriiriye oo ka socda 37 baloog. Marka, adduun dhan 52,900,000 oo baloogyo, 37 qof oo wax ku qora barta internetka ayaa helay macluumaadkeyga oo muhiim u ah inay aniga ila xiriiraan! Taasi waxay ku dhowdahay niyad jab!
On Saameynta iyo otomaatigga waxaa lagu qiimeeyaa 74,061 oo ka mid ah 52,900,000 baloog!
Dhinaca kale, waxaan kaliya haystay illaa 200 oo qoraal oo ku saabsan balooggeyga. Seth Godin kaliya garaac 1,000 posts. Waxaa laga yaabaa inay jirto fursad ah ka dib 800 oo dheeri ah oo dheeri ah oo aan iskudarsan karo Technorati's Top 100. (Sure… aniguna waxaan daabici doonaa 5 buug markaa, sidoo kale!)
Waxaas oo dhami waxay u ekaan karaan diidmo, laakiin maahan. Aynu dul dhigno meeris ka duwan. Adduunyada leh 52,900,000 oo baloogyo, lagu qiimeeyo 74,061 aad uma xun! Heck, taasi waa tan ugu sareysa 0.14% dhammaan baloogyada.
Marka halkaa waad heysaa. Bloggeygu wuu kafiican yahay 99.86% dhammaan baloogyada kale! 😛
Joogitaanka mawduuca bartaada? Adeegso daruurahaaga tag si aad wax u aragto
Sep 3, 2006 at 5: 02 PM
… Samee in 68 xiriiriyeyaasha: o)
Had iyo jeer way adag tahay in la qiyaaso guusha. Filimka "Jurassic Park" ma wuxuu ka fiican yahay filimka, dheh, "Syriana"?
Sep 3, 2006 at 7: 37 PM
Dagaal badhkiis qiimaynta balooggu waa isku xidhka iyo helitaanka nuglaantaada, isla markaana markaad labadaas shay hoos u dhigto, markaa arrimuhu way bilaabayaan inay kuu soo degdegaan, gaar ahaan Technorati
Iskuday inaan jabiyo naadiga Technorati 50K naftayda.
Sep 5, 2006 at 12: 28 PM
Darajo wanaagsan oo aad halkaas ku tagtay, waxaan ku jiraa 90, xxx aniga qudhaydu, uma xuma barta cusub haddii aan sidaa u idhaahdo myself
Waxaan ku cabbiraa guusha boggaga akhristayaasha, iyo faallooyinkooda. Akhristayaasha wanaagsan sida Yvonne, Rico iyo kuwa kaleba waxay baloog ka dhigayaan meel saaxiibtinimo leh waxayna siinayaan jawi wanaagsan. Waxaan blog ku qorayaa sababta oo ah waxaan doonayaa, darajada tikniyoolajiyaddu waa wax fiican oo dheeraad ah.
Feb 1, 2007 markay ahayd 1:10 PM
Taasi si fiican ayaa loo yiri. Had iyo jeer ku qanciso aragtidaada liidashada. Sii wad shaqada weyn!